तपाईंले किन्ने तरकारी र फलफूलको विषादी कसरी जाँचिन्छ ? – khabartime
२३ असार २०७६, सोमबार १७:४९ 82 पटक हेरिएको
काठमाडौं । तपाईंले भान्सामा प्रयोग गर्ने तरकारी वा दैनिक रुपमा खाने गरेको फलफूलमा विषादीको मात्रा कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने ? यसको जानकारी पाउनका लागि प्रयोगशालाकै जरुरत पर्छ, उपभोक्ताले हेरेर वा छामेर विषादी भए/नभएको थाहा पाउन सकिँदैन ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार देशभर १५ वटा यस्ता केन्द्रहरु छन्, जसको काम भन्सार बिन्दुमा आयात अथवा निर्यात हुन लागेका वनस्पतिजन्य बिरुवा स्वस्थकर छन् वा छैनन् भन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ ।
कसरी गरिन्छ विषादी परीक्षण ?
केन्द्रले तयार गरेको मापदण्ड अनुसारको नमूना ठीक भए/नभएको काब्रामेइट समूह ३ मिनेटमा तयार हुने कालिमाटी केन्द्रका प्रमुख जागेश्वर शर्माले अनलाइनखबरलाई बताए । यो परीक्षण सकिएपछि नतिजा अनुसारको कारवाहीका लागि बजार समितिलाई प्रयोगशालाले लिखित सिफारिस पठाउँछ ।
यस्तै ३५ देखि ४५ प्रतिशतबीचको मात्रामा विषादी भेटिएको तरकारी तथा फलफूल केही दिन कुरेर मात्रै प्रयोग गर्न – क्वारेन्टाइन ) सकिने र शून्य देखि ३५ प्रतिशतसम्म विषादी मिसाइएको तरकारी तथा फलफूल प्रयोग गर्न तथा बिक्री वितरणका लागि योग्य मानिन्छ ।
कहाँ-कहाँ हुन्छ विषादी परीक्षण ?
यसमध्ये बुटवल केन्द्रको काम कर्मचारी समायोजनले प्रभावित भएको छ । तर, त्यहाँ देखिएको मेसिनको समस्या समाधान भइसकेको प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए । अत्तरियाको बिगि्रएको मेसिन बनाउन प्राविधिक टोली पठाइएको छ ।
विषादी परीक्षण भए/ नभएको कसरी थाहा पाउने ?
अहिलेको सरकारी संरचना अनुसार मानाैं बनेपामा उत्पादन भएको कुनै एक अत्याधिक विषादी मिसिएको तरकारी कालीमाटी नपुगी गोंगबु पुग्यो भने त्यसमा विषादी परीक्षण भए वा नभएको सर्वसाधरणले छुट्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण भएको कुनै प्रमाण नहुने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी तरकारी र फलफूल विष सेवन गरे भन्दा कम छैन ।
नेपालमा उत्पादित वा छिमेकी देशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा कुन विषादी कति मात्रामा हालिएको छ र यो खानका लागि उपयोगी छ वा छैन ? यसलाई नाप्ने वैज्ञानिक प्रविधि विषादी नाप्ने संस्थासँगै छैन ।
प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजभण्डारीका अनुसार केन्द्रमा भएको प्रविधि र मोफसलका सबै एउटै हुन् । काब्रामाईट र अर्गानोफोस्पेट समूहमा पर्ने विषादी मात्रै हाल परीक्षण हुन्छ । यसबाहेक पनि दर्जनाैं नाम तथा समूहका विषादी कृषकले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, त्यसलाई नाप्ने यन्त्र केन्द्रसँग छैन ।